Alimony - milaza, kajy fa ny fandoavam-bola fikojakojana"ny fikojakojana - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Alimony - milaza, kajy fa ny fandoavam-bola fikojakojana"ny fikojakojana
Ny niavian'ny teny hoe alimony ao ny Roma fahiny
Any Alemaina, zanak nisaraka na nisara-panambadiana ny ray aman-dreny tsy tapaka ny fandaniana dia ho velona, izay ho antsoina hoe alimonyAnkoatra ny fanatanterahana ny fikojakojana ny zaza dia ny andraikitry ny alimony, vady (Taloha), mba manam-bola ray aman-dreniko na fianakaviana hafa eo ambanin'ny toe-javatra sasany ihany koa. Ao amin'ity lahatsoratra bilaogy ianao dia hianatra ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny lohahevitra alimony sy hampandrosoana ny Rohy ho ny lohahevitra momba ny lalàna momba ny fikojakojana. Amin'ny ankehitriny ny fiteny, ny teny hoe alimony dia manondro ny ankamaroany fotsiny amin'ny vola, ny fikojakojana ny fanajana ny zanaka, ny mpivady, ny ray aman-dreniko na fianakaviana hafa. Dia avy eo, ny fanohanana ny Emperora Trajan, fianakaviana amin'ny ankizy maro, izy karama azy ireo tsy tapaka"alimony". Nisy mihitsy aza ny vola madinika Romanina, izay ny andriamanibavin'ny sakafo be dia aseho miaraka amin'ny ankizy sy ny teny hoe"ALIM ITAL"eto ambany. Taonjato ny teny hoe nafindra tany alemana ary amin'izao fotoana izao, indrindra ho toy ny fikojakojana. Hafa ny teny mitovy hevitra alimony, alimony, ny fisotroan-dronono, Alimony, ny fisiana, ny fandoavana ny fikojakojana sy ny fiainana.
Alimony sy fanohanana ny ankizy, dia ampiasaina ao Alemaina, ary tsy mitsahatra ao amin ny manodidina.
Na izany aza, alimony dia mihatra ihany ho fotsiny ny fandoavana ny vola ho an'ny mahantra, ny zana-mitazona. Fikojakojana ahitana, na izany aza, ny isan'ny REHETRA fikojakojana ny tolotra ahitana ny:-bola fikojakojana (alimony), ny ankizy fanohanana amin'ny tsara fanahy sy ny fanohanana ny fikojakojana. Ny ray aman-dreny izay ny zaza velona, ary ny Birao sy ny trano ny zaza.
Toy izany koa, io ray aman-dreny ho an'ny andavanandro ny fitsaboana, fanabeazana.
Izany dia toy izany no manome ny fanohanana Voajanahary noho ny mahazatra ny ankizy, izay tsy latsaka ny vola ho fikolokoloana ny lanjany. Mba ahitana ny dependants ireo izay tsy afaka mahazo ny fiainana noho ny antony isan-karazany. Anisan'izany ny ankizy, teo Aloha ny mpivady, na ny Ny ray aman-dreny. Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny lohahevitra momba ny zaza fikojakojana ho hitanao, ankoatra ny zavatra hafa, eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, ny ankizy fanohanana ny fikojakojana ny adidy, fara fahakeliny, ny fikojakojana ary mialoha ny fikojakojana. Tsipiriany dia afaka mahita eo amin'ny pejy, spousal fanohanana, fisarahana, alimony, Nisara-panambadiana ny fikojakojana ary Hampitombo ny fikojakojana. Izay tsy maintsy mandoa ny alimony, dia ny Endriky ny fikojakojana.
Te-hianatra bebe kokoa momba ny spousal fanohanana
Ao amin'ny Manaraka, isika dia manazava aminao ny zavatra ny olona ao amin'ny ankizy ny fikojakojana, spousal fikolokoloana, ary ny ray aman-dreny ny fikojakojana ny fandoavam-bola fanohanana ny ankizy dia afaka ny ho tsy maintsy. Rehefa ny mpivady misaraka, na nisara-bady, dia samy ray aman-dreny ny zanakao dia tsy maintsy ho fanohanana. Ianao dia tsy maintsy azo antoka ny amin'ny kely indrindra ny fisian ny zanakao. Araka ny fisaraham-panambadiana ny fitsarana, ny rainy na ny reniny dia tsy maintsy noho izany, arakaraka izay ny zaza alimony ho an'ny ankizy na ny fiainantsika, eo isam-bolana fototra ny isan'ny ankizy. Ny fanohanana Voajanahary dia nomen'ny ray aman-dreny izay ny zaza velona. Izany dia noho ny sakafo karakaraina ny ankizy, ny fanabeazana ary manome azy ny tsara an-trano. Ny herin ny"trano sy ny Solaitrabe ny hoe:"dia tafiditra ao amin'ny fikojakojana adidy ny ray aman-dreny.
Ny ankizy fanohanana (Vola fikojakojana) dia tsy maintsy mandoa ny ray aman-dreny hafa.
Raha mifandray amin'ny teo Aloha-vady sy ny zanaka, dia tsy manan-danja. Ny spousal fanohanana dia mizara ho faritra roa, ny fisarahan ny fikojakojana ary ny Nisara-panambadiana. Rehefa toy izany ny manamarina mihatra ary rehefa miezaka tsy ho amin'ny Alimony avy ny Taloha-Mpiara-miasa dia afaka manantena fa ianao dia hianatra ao amin'ny lahatsoratra Nisara-panambadiana. Raha mila fikarakarana noho ny aretina, ny vola lany afaka tsy ho voasarona, matetika amin'ny alalan'ny tenany manokana dia midika hoe. Maharitra miraharaha fiantohana soa, dia matetika no tsy ampy. Misy fangatahana ny hantsana, izay ho milina amin'ny alalan'ny fandoavam-bola ny Alimony mipetraka haingana afaka. Ny olona Voakasika dia afaka tsy mandoa vola noho ny fikarakarana avy ao an-paosy, dia ny dingana amin'ny alalan'ny asa ara-tsosialy sy mandray ny tsy hita lany. Na izany aza, aiza ny ankizy dia sahiran-tsaina, ireo no nalaina raha te hampifaly an'andriamanitra. Izany dia midika fa ny fidiram-bola ny toe-draharaha ny ankizy, ny soso-kevitr'izy ny Deductible sy ny vola dia naka fanahy.
Rehefa fepetra rehetra no nihaona, ny voa ny ankizy na ny fiantraikany eo amin'ny ankizy sy ny ray aman-dreny ny ankizy mandoa fanohanana.
Ohatrinona ny alimony, dia miankina amin'ny karazana fikojakojana. Ny voalohany tombana ny habetsahan'ny alimony dia ny düsseldorf latabatra. Ny Düsseldorfer latabatra no ampiasaina ho toy ny benchmark ny kajy Alimony. Indrindra indrindra, ny fikojakojana ny zaza, izany dia toy ny tondrozotra mba hianatra ny fomba maro ny ankizy fanohanana ho an'ny zaza iray, janaka roa na mihoatra maintsy aloa.
Ny latabatra dia tsy ara-dalàna manan-kery fa tsara hevitra ny momba ny habetsaky ny ho avy alimony mba hijery afaka.
Eo amin'ny lafiny iray, ny düsseldorf latabatra, dia afaka mahita ny amin'izao fotoana izao ny latabatra, miaraka amin'ny fisaka ny tahan'ny vola ho an'ny ankizy ny fikojakojana, ny vola aloa rehefa avy net fidiram-bola sy ny vanim-potoana ny ankizy. Ny latabatra ny fikojakojana dia tsy mitovy ny habetsaky ny fandoavam-bola, satria ny zaza dia tsy mbola nosintonina ny vola hatreto. Eo amin'ny lafiny ny düsseldorf latabatra miaraka ny fandoavam-bola be, dia afaka mahita ny latabatra miaraka ny tena maro be. Arakaraka ny karazana alimony ny mpitrosa amin'ny fomba hafa avo mba deductibles. Ny deductible dia ny vola izay mitoetra ao amin'ny kajy ny fikojakojana ho niraharaha. Izany no ara-dalàna-voafaritra fisaka ny tahan'ny vola izay mandray ny fangatahana ny olona Voakasik'izany, raha tsy misy ny famerana izany, ho an'ny fiainanao manokana. Eo amin'ny lafiny be loatra raha mikasika ny fikojakojana, dia mandray indray mijery ny olana momba ny fampiasana manokana ny fikojakojana ary ankoatry ny latabatra noho ny habetsaky ny Deductible. Ny taona ny zaza sy ny fidiram-bola ny ray aman-dreny dia ny kajy ny zaza fikojakojana be. Eo amin'ny lafiny iray, ny fikojakojana fanaovana kajy, dia hahita ny fikojakojana fanaovana kajy kajy ny habetsahan'ny alimony ho an'ny ankizy. Mba manao kajy ny haavon'ny ny fisarahana fikojakojana na Nisara-bady mitandrina, dia tsy maintsy mitandrina, ny vola miditra aterineto, vongana mamintina ny asa mifandray amin'ny fandaniana, ary ehebedingte findramam-bola be. Ny pejy fisarahana fikojakojana, sy ny nisara-panambadiana eo ambany dia ahitana ny antsipiriany ohatra ny kajy spousal fikojakojana.
Ao amin'ny kajy ny ray aman-dreny mba hitandrina ny nanitsy ny vola miditra aterineto ny ankizy, ny deductible sy ny lafin-javatra hafa be.
Araka izay rehetra deductions, ny habetsahan'ny alimony noho ny ray aman-dreniko. Ny habetsahan'ny Alimony mety hiova arakaraka ny karazana fikojakojana. Ny zaza fikojakojana, misy sliding sehatra miorina amin'ny taona ny zanakao, izay ny habetsahan'ny alimony tsy tapaka intervals mampitombo ny mitombo ny zaza. Toy izany koa, ny fiovana ao amin'ny fidiram-bola amin'ny samy ray aman-dreny, amin'ny fotoana rehetra, ka ny ankizy fanohanana dia tsy maintsy ho recalculated. Ireo dia afaka ny ho correspondingly ambony na ny ambany. Ny vadiny sy ny Ray aman-dreny, tsy misy raikitra vola ho fanohanana ny ankizy. Ny habetsahan'ny alimony dia tena fidiram-bola miankina. Eto dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny amin ny raharaha amin'ny raharaha. Ny fidiram-bola ny vady na ny zanaka, ny habetsaky ny fikojakojana dia tsy maintsy ho kajy indray. Alimony ho an'ny ankizy tsy maintsy aloa ho amin'ny taona ny zanakao, na ankoatra izany, raha toa ka ny zanakao no mbola eo amin'ny fianarana na fiofanana fiofanako na eo amin'ny asa hihaza. Ny Nisara-panambadiana, ny fikojakojana dia mety ho voafetra ho fe-potoana iray taona vitsy, fa latsaka izy na ahoana na ahoana, raha vao toy ny Ex-Mpiara-miombon'antoka ara-bola dia hita sy re-na manambady na, tokoa, ny fandoavam-bola ny alimony dia nanofahofa. Ny fiainana maharitra spousal fanohanana dia tsy ny fitsipika, fa ny marimarina kokoa afa-tsy izany. Fisarahana fikojakojana dia aloa hatramin'ny farany ny fisaraham-panambadiana na ny raharaha ny fiovana lehibe eo amin'ny fidiram-bola ny toe-javatra ny alimony ho napetraka aloha. Ny faharetan'ny fandoavam-bola ny ray aman-dreny alimony dia ho amin'ny fiainana. Ny fikojakojana adidy mifarana ihany no miaraka amin'ny fahafatesan'ny ray aman-dreny sy ny ray aman-dreny miahiahy. Izany no tena mivarotra azo atao zaza hanohanana ny vola avy amin'ny hetra. Ny alimony ho an'ny mpivady dia hetra deductible toy ny fandaniana manokana, na tsy miavaka ny enta-mavesatra mba hivarotra. Ny fanontana manokana hatramin'ny mey. euros isan-taona dia ho intsony Na izany aza, dia fepetra takiana mialohan'ny ahafahana ny deduction ny manokana vola fa ny tompon-trosa nanaiky ny deduction.
Fa ny fankatoavana ity Tovana U, fizarana B, dia tsy maintsy sonia.
Ankoatra izany, ny mpandray tokony mamaritra ny fikojakojana ny manokana ny hetra Fanambarana ao amin'ny Tovana toy ny"fidiram-bola hafa". Ny fankatoavana dia manana, mifandimby, ny hetra, ny fikojakojana ny Ny mpandray. Raha ny mpandray manome ny hazo fijaliana-ary ny fifanarahana dia tsy manome, dia mbola misy foana ny mety hisian'ny alimony toy ny enta-mavesatra miavaka mba hivarotra. Izany dia ny may Euros, izany Endrika fahalotoana ho intsony. Ho vita ny rafitra fikojakojana dia ilaina. Spousal fanohanana sy fanohanana ny ankizy ihany no azo, eo ambanin'ny toe-javatra sasany, retrospectively milaza: fisarahana fikojakojana, ny fanarenana dia voafetra ho iray taona. Nisara-panambadiana ny fikojakojana ny fotoana-tsy, na izany aza, raha tsy aorian'ny telo taona. Ny famerana ny fe-potoana raha ny fikojakojana ny zaza dia afa-tsy ny raharaha ny filazana araka ny.
Taona, izay matetika ny telo taona.
Ny filazana ho an'ny alimony ho an'ny ankizy tsy ampy taona tsy ny fotoana misy.